BestCities: solontena avy any Bogotá handray ny 'Herin'ny olona'
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » BestCities: solontena avy any Bogotá handray ny 'Herin'ny olona'
Ny fikambanana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia hidina ao Bogotá, Kolombia, amin'ity volana desambra ity, mandritra ny herinandro misy mpandahateny manentana fanahy, atrikasa mampihetsi-po ary tambajotra manerana ny lohahevitry ny Herin'ny Vahoaka amin'ny BestCities Global Forum isan-taona. Miezaka hahatratra ny laharam-pahombiazana 100% avy amin'ny solontena mandritra ny taona fahatelo, ny programa ho an'ny Forum 2018 dia feno hetsika izay hanatsara ny fahaiza-manaon'ny mpitantana fikambanana.
Ny antsipirian'ny zavatra antenaina amin'ity Forum ity tamin'ity taona ity dia naseho tamin'ity maraina ity tamin'ny sakafo maraina natolotry ny BestCities nandritra ny IMEX Frankfurt. Natao fiaraha-miasa amin'ny Birao Fivoriambe Greater Bogotá (GBCB), ny lohahevitra amin'ity taona ity dia hiompana amin'ny The Power of People. Manampy amin'ny fanamorana ny olona hanao bebe kokoa, ny fampielezan-kevitra The Power of People dia miresaka ny fahafahan'ny olona manova na inona na inona manodidina azy.
Amin'ny fotoana ahafahan'ny olana ara-jeopolitika na ny fetra ara-pinoana mamorona sakana amin'ny fizarana fahalalana sy fiaraha-miasa, ny indostrian'ny hetsika ara-barotra dia tsy mbola nanana andraikitra lehibe kokoa. BestCities dia mijery an'io amin'ny alàlan'ny fanangonana tanàna mpiara-miasa 12 avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izay mampiroborobo ny fenitra avo lenta indrindra amin'ny kaonferansa sy hetsika. Mamporisika azy ireo hijery lavitra ny fizahan-tany izany ary hamela lova maharitra. Amin'ny alàlan'ny fanatontosana ny Global Forum isan-taona dia mametraka fanabeazana ireo tompon'andraikitra ambony eo amin'ny fikambanan'ny zokiolona momba ny maha-zava-dehibe ireo lohahevitra ireo ary koa mampiseho 12 toerana ambony misy ny kilasy. Ny programa Power of People dia mikendry ny hamaha ireo olana ireo, hiteraka adihevitra mandroso ary hampandroso ny anton'ny fihaonana iraisam-pirenena.
• Rick Antonson “mpanatanteraka tsy nahy” ary Tale jeneralin'ny Tour Vancouver teo aloha. Rehefa nitety an'izao tontolo izao izy, nanoratra boky dimy ary nitana ny anjara asany tamin'ny zava-bita malaza indrindra tany Canada, dia hitondra ny làlany tsy dia manaraka firy amin'ny fandaharana i Rick raha hiresaka momba ny fotoanany tao amin'ny Tour Vancouver.
• Lina Tangarife, talen'ny andraikitra ara-tsosialy ao amin'ny Alliance Alliance of Uniandinos. Manam-pahaizana amin'ny fitantanana stratejika ny Fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena, nampiasa ny herin'ny vahoaka izy tamin'ny fanamafisana ny asa an-tsitrapo ao anatin'ny orinasa, governemanta ary fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana.
• Neyder Culchac, tanora mpitarika. Avy amin'ny faritra antsoina hoe Putumayo any atsimo andrefan'ny Columbia, Neyder dia nihalehibe voahodidin'ny fifanolanana saingy tapa-kevitra ny tsy hamela azy hisakana azy tsy hanao fanovana tsara izy. Mamorona fandraisana andraikitra manova ny fiainan'ny fianakaviana 480 ao anatin'ny fiarahamoniny i Neyder dia hizara ny tantaram-piainany ary hampianatra ireo solontena amin'ny herin'ny finiavana.
Hiverina amin'ny taona faharoa, Sean Blair, tompon'ny ProMeet, dia hanamora ny Forum amin'ity taona ity. Natao tao amin'ny Agora Bogotá Convention Center, roa kilaometatra monja avy eo afovoan-tany manan-tantara an'i Bogotá, ny forum mandritra ny efatra andro dia misy lahateny maro, atrikasa ifanakalozana ary programa ara-kolontsaina hianarana momba ny faritra sy ny kolontsain'i Amerika Latina.
Toy ny tamin'ny taona lasa, ny delegasiona dia hanatrika Dinner Ambasadaoro hihaona amin'ireo namany, masoivoho eo an-toerana ary fifandraisana akaiky manome azy ireo fotoana hananganana fifandraisana ary hampitombo ny tamba-jotra manerana an'izao tontolo izao. Miverina indray ny fivorian'ny City Café malaza sy ny vinan'ny tambajotra sosialy miaraka amin'ireo mpiaramiasa 12 an'ny BestCities (Berlin, Bogotá, Cape Town, Copenhagen, Dubai, Edinburgh, Houston, Madrid, Melbourne, Singapore, Tokyo ary Vancouver).
Paul Vallee, Tale mpitantana ny BestCities Global Alliance dia nilaza hoe: "Amin'ny alàlan'ny programa fanabeazana, fahitana ary tambajotra manaitra hatrany, ny BestCities Global Forum fahatelo dia hanome fahatakarana lalindalina kokoa an'ireo delegasiona momba ny herinaratra sy fivoriana mba hamoronana fanovana amin'ny alàlan'ny vahoaka, ary ny fotoana ahafahana mamokatra lova maharitra. Izy io dia mamorona hetsika tsy manam-paharoa miaraka amin'ireo mpandahateny, atrikasa ary seha-pifandraisana marobe.
“Miasa amin'ny indostria iray izay tena ivon'ny zavatra rehetra ataontsika ny olona. Ny lohahevitry ny Herin'ny Vahoaka sy ny fampielezan-kevitra dia hiasa mba hanasongadinana ireo olona manentana fanahy maro izay miasa mba hanatsara ny indostria sy hamorona lova maharitra.
“Faly be ny rehetra handeha ho any amin'ny tanànan'ny Amerika Latina ho an'ny Global Forum amin'ity taona ity. I Bogotá no hany toeran-kaleha any Amerika Latina ao amin'ny Global Forum ka ho feno traikefa ara-kolontsaina vaovao hankafizin'ny tsirairay. Ny olona no manao an'ity tanàna ity ary izany no tanjona lavorary hampiantrano ny lohahevitra amin'ity taona ity. Entaniko ny solontena rehetra mahafeno fepetra mba hisoratra anarana hanatrika izany alohan'ny tara loatra. ”
Jorge Mario Díaz avy ao amin'ny Birao Fivoriambe ao Greater Bogotá dia nilaza hoe: “Ny tanàna iray manontolo dia mivoaka hanao Global Forum mandritra ity taona ity. Ny olona rehetra dia sahirana manomana sy mametraka izay azony atao ao ambadik'izany mba hahatonga ny Forum tsy ho hadino sy hianatra ihany koa fa haneho ny The Power Of People an'ny mpikambana ao amin'ny Alliance.
“Faly be aho fa nitondra ity dinika malaza ity ho an'ny tanànantsika, ary afaka mizara ireo olona sy kolontsaina mahafinaritra any Amerika Latina amin'ireo tonga.
Ho an'ny taona voalohany, ny lohahevitry ny Global Forum dia nozaraina tamin'ny alàlan'ny fanentanana nomerika tarihin'ny GBCB. Ny fanentanana dia mikendry ny hanome ny tena fahatakarana sy ny dikany izay ananan'ny The Power of People ao anatin'ny indostria afaka manova. Ireo mpiara-miombon'antoka 12 ao amin'ny BestCities Global Alliance dia naneho ny fanohanany ny hetsika. ”
Nandritra ny taona voalohany, ny lohahevitry ny Global Forum dia nozaraina tamin'ny alàlan'ny fanentanana nomerika tarihin'i GBCB. Ny fanentanana dia mikendry ny hanome ny tena fahatakarana sy ny dikany amin'ireo hery ananan'ny olona ao anatin'ny indostria iray izay afaka manova. Ireo mpiara-miombon'antoka 12 amin'ny BestCities Global Alliance dia naneho ny fanohanany ny hetsika.
Misokatra izao ny fisoratana anarana amin'ny BestCities Global Forum Bogotá. Maimaimpoana ny fanatrehana, miaraka amin'ny sidina mandroso sy fitsangatsanganana ary toeram-pisakafoanana ho an'izay rehetra manatrika ekipa iraisam-pirenena mahafeno fepetra izay rakotry ny BestCities.
Maka ny famoronana sy ny fanavaozana any amin'ny avo vaovao ao amin'ny IMEX any Frankfurt
Cunard's Queen Mary 2 manomboka amin'ny vanim-potoana Transatlantic 2018